Dawladaha Soomaaliya iyo Qadar oo Xiriirkood Xoojinaya – SOMALI RADIO ONAIR
Safiirka dowladda Qatar u fadhiya magaalada Muqdisho Xasan Bin Xamza ayaa bogaadiyay xiriirka adag ee u dhaxeeya dowladda Qatar iyo Soomaaliya.
Safiirka oo la hadalay Wakaaladda Wararka Qatar ee QNA, ayaa sheegay in socdaalka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dalka Qatar uu qeyb ka qaadan doono sii xoojinta xiriirka dhinacyada kala duwan leh, gaar ahaan xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Amiirka dalka Qatar. Tamim bin Hamad al-Thani iyo Madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Qatar ayaa Soomaaliya ka taageerta dhinacyo badan oo ay ka mid tahay maalgelinta waddooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo Jowhar, iyadoo ku adkeysay in mashaariicdan ay faa’iido u yeelan doonaan guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya, maadaama ay isku xirto goobaha wax soo saarka ee labada dal. magaalooyinka leh suuqyada caasimad
Safiirka ayaa sheegay in dowladda Qatar oo ay wakiil ka tahay Sanduuqa Horumarinta Qatar ay sidoo kale dib u dayactir iyo dib u dhis ku sameysay xarumo dowladeed oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xarunta dowladda hoose ee Muqdisho iyo machadka dublamaasiyadda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, iyadoo ay u dheer tahay 68 gaadiidka gaashaaman oo ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda Gaashaandhigga Qatar in ay taageerto ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo dagaal kula jira Alshabaab iyo Daacish
Shil khasaare sababay oo ka dhacay Puntland